Ronzanyika - Wikipedia
(Redirected from Uronzanyika)
Izwi rokuti ronzanyika riri kushanda pano kuturikira chinonzi Geology kuEnglish chinova chidzidzo chezvemiutmbi iri muchadenga inosanganisira Pasirino ratigere. Chidzidzo ichi chinotarisa kuumbwa kwakaitwa mitumbi iyi, mabwe arimo uye nzira dzaakaumbwa nadzo - uye chinobatsira kune avo vanotsvaga pokuchera migodhi yesimbi nemafutarubwe.
Izwi rokuti kuronza (to tell, to explain, to relate) rinoreva kutaura zvakajeka zvinonzwisisika. Saka tikati ronzanzanga zvinoreva kuti chidzidzo ichi chakasvika pakutsanangurwa kwakajeka uye kuchinzwizisika. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti ronzanyika rinodudzira zvimwechete nokuti duranyika.
Shoko rokuti dura (mention, intepret, give meaning) rinoreva kutaura kunobuditsa pachena zvose zvinozivikanwa maererano nemusoro wenyaya iri mudariro. Apa ndipo pabva chivakamberi chokuti dura-. Chivakamberi ichi chiri kushandiswa kuturikira chivakamberi cheEnglish chinoti -logy chinoreva a speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science".
Ronzai kune vakarurama, kuti zvinozovanakira, ngokuti vanozodya michero yezviito zvavo: Tell the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings. (isaiah 3:10, Bhaibheri reChiNdau).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronzanyika&oldid=55280"
This page was last edited on 7 Kukadzi 2018, at 20:46.